လင်္ကာ: ထာဝရနှင်းဆီ(သို့ မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ထာဝရနှင်းဆီ(သို့ မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ဖခင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထက်နှစ်ဆသာသွားပြီ။ …ဟုတ်တယ်…..နှစ်ဆသာသွားပြီ။
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးသွားတော့ သူ့အသက်က ၃၃ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေ။ အခု အန်တီစု အသက်က ၆၆ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ထက်တော့လူ့ဘ၀မှာနှစ်ဆနေခွင့်ရသွားပြီ.. (နေခွင့်ရသွားပြီလို့ပြောလိုက် တာက နေခွင့်မရအောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိလို့ပါ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ အသံကြားရင် ဒေါသတွေမွှန်လာတတ်တဲ့ န.၀.တ အတွင်းရေးမူး ( ၂ ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး။
သူတို့တတွေ…….သူတို့တတွေ ငရဲပြည်မှာဆုံစည်းနေကြရင်….တကမ္ဘာလုံးမှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပတော့မဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲကို ကြည့်ရင်း ဒေါသတွေနဲ့ ကျိန်ဆဲနေရှာရော့မယ်……
အောင်မာ…၆၆ နှစ် မွေးနေ့ပွဲတောင် ကျင်းပနေပါ့လား….တောက် ”
သူတို့ထက် ပိုခံစားရမှာက………မကျယ့်တကျယ်နဲ့ နေနေရတဲ့….ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် တို့…..ကျော်ဘ တို့လိုလူတွေ...
ထောင်ထဲမနေရယုံတမယ် နေနေရတဲ့ ……မာယာများတတ်တဲ့…..ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လိုလူတွေ။
သူတို့တတွေကတော့ပြောနေရော့မယ်…..“လူကြီးသူမတွေပြောတဲ့…ဆံပင်ဆိုတာဒါမျိုးများလား..ရိတ်လေ.. သန်လေ တဲ့… ရိတ်တဲ့သူတွေသာ အရိတ်ခံလိုက်ရတယ်…ဆံကတော့ သန်ဆဲပါပဲလား……”
ထောင်ဝန်ထမ်း အစောင့်များလည်း ဖြစ်လာကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည် )ကြားက စံနန်းတော်ကြီး ပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေ ကတော့……..ဖြစ်ပျက် တရားကိုရှုရင်း…….
ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အရာတွေဟာ ပျက်တော့မှာပါလား….ဆိုတဲ့ သံဝေဂ လေသံအပြည့်နဲ့ မြည်တွန် နေဆဲ……
အာရုံထဲမှာသူ့လူတွေက သူ့ကိုအာဏာဖီဆန်တော့မဲ့ နိမိတ်ပုံရိပ်….သူသတ်ခဲ့တဲ့သံဃာင်္တွေရဲ့ခြောက်လှန့်
နေမှုများကြားက………အော်….မစုတောင်…..၆၆နှစ်ပြည့်ပြီပဲ….ငါတို့လည်းနေ၀င်ချိန်နီးပါပေါ့..ဆိုပြီးသင်ခန်း စာတွေရနေမလား…….အတိုက်အခံဆိုလက်ညှိုးထိုးကောင်ယုံလောက်ထား..ကျန်တာရှင်း..တလက်မမှ တက်မလာစေနဲ့ဆို….ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ ကန်လန့်ကာနောက်ကွယ်က မုန်ယိုနေမလား။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထာဝရနှင်းဆီရဲ့ရနံ့တွေကြိုင်သင်းနေတာကတော့ ၆၆ နှစ်တိုင်ခဲ့လေပြီ။
ကျနော် ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်နေတော့ ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပေါ်ထွက်မလာသေးဘူး ) စိတ်ထဲမှာခွန်အားတခုဖြစ်မိတာရှိတယ်………မြန်မာပြည်လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကိုဦးဆောင်ဘို့အမျိုးသား
ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသား အောင်ဆန်းဦး ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ ။ ကျနော်တို့ဝမ်းသာမိခဲ့တာအမှန်ပါ…..ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာကောလဟာလတွေဖြစ်ပြီးသမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဖန်တီး
သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်လောက်အကြာမှာသိလိုက် ရပါတော့တယ်။ တကယ်တော့မြန်မာလူထုတော်တော်များများကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သိပ်မျှော်တွေးမထားမိကြဘူး။ အရင်ဆုံးမျှော်လင့်ခဲ့မိသူက အကိုဖြစ်သူ…ဦးအောင်ဆန်းဦး………….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုဖြစ်တည်လာခဲ့မှုမှာ…ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အရိပ်ပါ ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ လုံးလုံးလျား လျားကြီးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး…….
သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးကိုရော လူထုက ဒီလိုသဘောထား တထပ်တည်းရှိပါသလား………
တခါမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလူတ်ရှားမူ့သက်တမ်းအနှစ်၂၀ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါသူ့အပေါ်အပြစ်ဖို့သူ တွေကဖို့……..ဆရာကြီးလေသံတွေနဲ့ဟိုဟာလုပ်ပါ့လား….ဒီဟာလုပ်ပါ့လား….ဟိုဟာမလုပ်ခဲ့လို… ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့…ဒီဟာမလုပ်လို့…ဟိုဟာမဖြစ်တာပေါ့….စသည်..စသည်ဖြင့်… …သေချာတာတခုကတော့….ယောက္ခမသေမယ်မှန်းသိရင်…နွားအကြွေးဝယ် လိုက်တာပေါ့ဗျာ………..
မျက်စိဖွင့်ပြီး အိပ်ကြည့်စမ်းပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းလိုလား………
သူလုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ….. ကျနော်ပြောရဲတယ်ဗျာ….သူတကယ်လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်……….
ဒါပေမဲ့……အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂျော့ဝါရှင်တန်ကတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်…. စနစ်တခုကို ကူးပြောင်းဘို့တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်……
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီ့ စနစ်ကို အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ဘို့ အခွင့်အလမ်းတွေ သင့်ဆီကိုရောက်လာခဲ့ရင်……သင့်ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် အမွေဆက်ခံနိုင်မှာမို့ပါတဲ့…….